Kuwait City na-akwado nzukọ 52nd nke Arab Air Carriers Organisation
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Kuwait City na-akwado nzukọ 52nd nke Arab Air Carriers Organisation
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akwụkwọ akụkọ Kuwait • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Kuwait isi obodo Kuwait City nabatara nzukọ nzukọ kwa afọ nke 52 nke Ndị na-ebu ụgbọ elu nke Arab (AACO).
Na mmemme mmeghe ahụ, Mịnịsta na-ahụ maka ego nke Kuwaiti Nayef Al-Hajraf kwuru na nzụlite nke ngwangwa nke ụwa, ndị ụgbọ elu ndị Arab kwesịrị imepe oghere iji nyere aka kwalite mmepe na-adigide nke ụwa Arab.
Ndi Arab kwesiri imekọ ihe ọnụ iji nweta ihe ịga nke ọma na nchekwa akụ na ụba site na ibuso nsogbu, imeri ihe isi ike na ịkwalite echiche nke ahịa ndị Arab, ọ gbakwụnyere.
Yousef Al-Jassem, onye isi oche nke Kuwait Airways, kwuru na mpaghara ndị njem ụgbọ elu Arab bụ nnukwu injin maka akụ na ụba nke mba Arab.
O kwuru na nsogbu ndị dị mkpa gụnyere mmachi arụ ọrụ na nkwekọrịta ọrụ ikuku na ike ndị ụgbọ elu ịrụ ọrụ akụ na ụba ha n'ụzọ zuru oke.
Abdul Wahab Teffaha, odeakwụkwọ ukwu AACO, kwuru na ngalaba ụgbọ elu mba ụwa ahụla ihe ruru pesenti isii na ọnụọgụ ndị njem kemgbe 2010.
Addedgbọ njem na ọdụ ụgbọ elu Arab amụbawo site na nkezi kwa afọ nke 6.8 pasent kemgbe 2010, ọ gbakwụnyere.